मुलुककै जेठो प्रसारण माध्यम रेडियो नेपालले आज आफ्नो ६६ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । यसको अर्थ रेडियो नेपाल आजदेखि एक वर्ष अभैm पाको बनेको छ । २००७ साल चैत २० गते नेपाल रेडियोका रूपमा प्रसारण थालेको रेडियोले त्यसपछि रेडियो नेपालका रूपमा आफ्नो प्रसारण निरन्तर गरिरहेको छ ।
रेडियो नेपालको इतिहास प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएको छ । विद्रोहका क्रममा नेपाली काँग्रेसले २००७ साल मङ्सिर २८ गते बिहान विराटनगर जुट मिलबाट ‘प्रजातन्त्र रेडियो’ को नाममा समाचार प्रसारण गरेको थियो । त्यसका प्रथम वाचक तारिणीप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । त्यही प्रसारण यन्त्र काठमाडाँै ल्याइ सिंहदरबारको स्टुडियोमार्फत २००७ साल चैत २० देखि विधिवतरूपमा रेडियो नेपालको प्रसारण गरियो । प्रजातन्त्र स्थापनापछि तारिणी कोइरालालाई रेडियो नेपालको प्रथम डाइरेक्टरमा मनोनित गरिएको थियो । हुन त यसअघि २००७ को मङ्सिरमा नेपाली काँग्रेसकै कार्यकर्ताबाट र त्यसअघि २००३ मा काठमाडौँको विजुली अड्डाबाट रेडियो प्रसारण भएको भनिन्छ तर ती प्रसारण रेडियो यन्त्रमार्फत नभएर ट्रान्जिष्टर वा हेम्ब रेडियोबाट थिए ।
प्रारम्भिक अवस्थामा २५० वाटको ट्रान्समिटरबाट दैनिक चार घण्टा प्रसारण हुँदै आएको रेडियो वि.सं. २०१७ देखि दैनिक पाँच र २०२५ देखि १२ घण्टा प्रसारण हुन थाल्यो । यसैगरी, २०४१ बाट दैनिक साढे १३ घण्टा प्रसारण गर्न थालेको रेडियो नेपालले हाल एफएमबाट दैनिक २४ र एएमबाट १८ घण्टा प्रसारण गर्दै आएको छ । नयाँ नेपालको समावेशी आवाज नाराका साथ काठमाडौँमा ७९२ किलोहर्ज (सिंहदरबार) तथा ११४३ किलो हर्ज (गौरीडाँडा)ं, ६८४ किलोहर्ज पोखरा, ६४८ किलोहर्ज धरान, ५७६ किलोहर्ज सुर्खेत, ८१० किलोहर्ज दिपायलबाट प्रसारण हुँदै आएको छ ।
रेडियो नेपालबाट मूलतः विभिन्न प्रकारका समाचार, सूचना र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । हाल नेपाली, अङ्ग्रेजी, मैथिली, भोजपुरी, नेवारी, हिन्दी, र अन्य क्षेत्रीय भाषामा समाचार प्रसारण गर्ने रेडियो नेपालमा सुरुमा तारिणीप्रसाद कोइराला र गजाधरभक्त माथेमाले नेपालीमा, हिन्दीका प्रसिद्ध कवि फणीश्वरनाथ रेणुले हिन्दीमा र विजयालक्ष्मी (बी.पी. र तारिणी कोइरालाकी बहिनी) ले अङ्ग्रेजीमा समाचार वाचन गर्दथे ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०५८ मा नेपाल सरकारले प्रसारणमा खुला आकाश नीति अवलम्बन गर्नुअघि नै रेडियो नेपालले एफएम (फिक्वेन्सी मोडुलेसन) प्रसारण गरेको थियो । त्यसपछि हाल मुलुकभर करिव चार सय जति स्थानीय रेडियो (एफएम) प्रसारण भइरहेका छन् । केही समयअघिसम्म आम नेपाली श्रोताले रेडियो भनेको रेडियो नेपाल मात्रै हो भन्ने बुझ्ने अवस्था थियो । हुन त केही सचेत श्रोताले रेडियो नेपालको अतिरिक्त बीबीसी र आकल इण्डिया रेडियो सुन्ने गर्थे तर पहुँच तथा ज्ञानका कारण नेपालभर रेडियो नेपाल नै सुनिन्थो । रेडियो नेपाल गत वैशाखमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा पीडित श्रोताहरूको सहारा बनेर उभियो । भूकम्पले थिलथिलो बनेका मनहरूका २४ घन्टे साथी बनेर रेडियो नेपालले आफ्नो प्रसारण गरेको थियो । सुरक्षित स्टुडियो र साहसी रेडियोकर्मीका कारण यस्तो काम गर्न सम्भव भएको थियो । श्रोताहरूले विपद्का बेला रेडियो नेपाललाई अति निकटको साथीका रूपमा लिएको पाइयो ।
प्रविधि, स्टुडियो र कतिपय सन्दर्भमा आधुनिकता प्रवेश गरेको भए पनि रेडियो नेपाल अझै पनि केही पुरातन ढङ्गबाट निरन्तर प्रसारणमा छ । हुन त समयले कसको महìव कति बेला बढाउँछ भने कुनै बेला घटाउँछ । यसको पछाडि विभिन्न कारण पनि होलान् तर रेडियो नेपाल प्रत्येक नेपालीको मनमा बस्दाबस्तै पनि व्यवस्थापन, सरकारी दृष्टिकोण, प्रसारण माध्यमका नयाँ विकल्प र सोसल मिडियाको लोकप्रियताजस्ता पछिल्ला परिवर्तनले रेडियो नेपालले थप र नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारणको हैसियतमा वैशाख १२ को भूकम्पले रेडियो नेपालको महìव एकाएक बढाइदियो । यसले आफ्नो प्रसारण क्षमता र ढाँचालाई अझ वृद्धि गर्न आवश्यक देखिएको छ । हालै मात्र रेडियो नेपाल सुधारका लागि विभिन्न कार्ययोजना सार्वजनिक भएका छन् । कार्ययोजना सार्वजनिक हुने तर काम नहुने विगतको उदाहरण अब बिर्सनु आवश्यक छ । अब सुधारको प्रत्यक्ष अनुभूति श्रोताले गर्न सक्ने खालको हुनु आवश्यक छ ।
हालसम्म पनि आधिकारिक सूचना रेडियो नेपाल विना विश्वास नगर्नेको जमात ठूलै छ । अर्कोतर्पm रेडियो नेपाल अहिले पनि छ र भन्नेहरूको जमात पनि देखिन थालेको छ । अब रेडियो नेपालको महìव देख्नेलाई अझै विश्वास जगाउने र रेडियो नेपाल खोज्नेहरूका लागि यसको निरन्तर खाँचो सावित गराउने काममा रेडियो नेपालले आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको छ । हुन त एफएम सुन्ने बानी परेकालाई रेडियो नेपालले पस्कने सामग्रीहरू चाखपूर्ण नहोलान् तर एफएमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न रेडियो नेपाल एफएम रेडियोजस्तो बन्नु आवश्यक पनि छैन । जरुरी छ त केवल रेडियो नेपालकैरूपमा, विश्वास र मर्यादित सबै नागरिकले सुन्न सक्ने र सुन्नैपर्ने रेडियो नेपाल बनाउनु ।
नेपालजस्तो गरिबी र अस्तव्यस्तताले जकडिएको राष्ट्रमा अन्य विकसित राष्ट्रमा भन्दा रेडियोको भूमिका महìवपूर्ण देखिन्छ । गरिबी, भोकमरी, अभाव, अशान्ति, अस्थिरता भएका राष्ट्रमा रेडियोजस्तो प्रभावकारी भूमिका अन्य माध्यमले खेल्न नसक्ने देखिएको छ । असमान भौगोलिक धरातल र असमान विकासले गर्दा नेपालमा रेडियोको पहुँच अझ बढाउनुपर्ने मात्र होइन यसले पस्कने सामग्रीहरूमा समेत परिमार्जन आवश्यक छ । आज जसले जे दाबी गरे पनि नेपालमा रेडियो नेपालको विकल्पमा आवाजविहीनहरूको आवाज पस्कने अन्य माध्यम देखिएका छैनन् । खाँचो त्यति हो, रेडियो नेपाल कुइरोको काग हुन भएन । निजीस्तरमा खोलिएका एफएम माध्यमले स्थानीयस्तरको प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि यी लगामविनाका घोडा भएका आरोप लागेको छ । आन्दोलनमा सहभागी हुन यस्ता रेडियोले सूचना प्रवाह गरेको सुन्ने श्रोतालाई रेडियोको भूमिका र मर्यादाका बारेमा रेडियो नेपालले शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । नियन्त्रण र नियमनभन्दा परका केही प्रसारण माध्यमले सत्य, तथ्य निष्पक्षजस्ता पत्रकारिताको धर्म धान्न सकेका छैनन् । त्यसैले उनीहरूमाथि आमनागरिकको विश्वास रेडियो नेपालको तुलनामा कमजोर छ । त्यसैले रेडियो नेपालको पहुँच र प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ । रेडियो नेपालमाथि जति बूढो भयो, त्यति नै जिम्मेवारी थपिँदै गएको छ ।
नेपालको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र छ रेडियो नेपाल तर पनि आपूmलाई कमजोर महसुस गर्नुपर्ने हो कि जस्तो अवस्था छ । आमश्रोताका विश्वासको ठूलो भारी बोकेर कमजोर अवस्थामा रेडियो नेपाल धेरै समय कराउन सक्दैन । ठूलो जिम्मेवारी तर कमजोर अवस्थामा रेडियो नेपाल अब अघि बढ्न सक्दैन । व्यावसायिक मात्र होइन अनेकन समस्या समाधान गर्दै हिमाल, पहाड, तराई–मधेसका श्रोताबीचको सेतु बन्नु छ रेडियो नेपालले ।